Momba anay - Hebei Shuolong Metal Products Co., Ltd.
Sarimihetsika Metal Architectural Facade
Railway & fiarovana vy harato
Lamba mitaingina haingam-pandrefesana sy rindrina anatiny
Haingon-trano valin-drihana haingon-trano
Atitany fizarana harato
Fanaka Atsofohy vy harato
Lamba vita amin'ny metaly vita amin'ny vera
Curtain vy harato
FANDINIHANA NY ORINASA
Manome vahaolana tsara indrindra ho an'ny talenta
Miaraka amin'ny traikefa 12 taona mahery tamin'ny fanenomana harato metaly haingon-trano
ShuoLong metaly harato dia mpanamboatra mari-pahaizana ISO matihanina, mifantoka amin'ny famokarana, Fikarohana sy fampandrosoana ny harato tariby avo lenta ho an'ny indostrian'ny haingon-trano. Manompoa indrindra ny injenieran'ny maritrano manerantany & orinasa mpifaninana ary andrim-pananganana maritrano.
Ny ekipa mpiorina metaly shuolong dia afaka manampy anao amin'ny endrika miorina amin'ny tranobe, lalamby, rindrina ivelany, canopy, fipetrahana fiaran-dalamby, fiorenan'ny valindrihana, ridao metaly, efijery haingon-trano, fanakonana rindrina, harato vita amin'ny vera vita amin'ny vera, efitrano fandraisam-bahiny ary varotra lehibe hafa & tetik'asa ho an'ny daholobe.
Ny habetsaky ny vokatra sy ny safidy fanamorana dia mamela antsika hanohana amin'ny dingana famolavolana tany am-boalohany. Izany dia mahatonga ny tetikasa hahazo vokatra sy fiasa tsara tarehy.
Fa maninona no mifidy metaly metaly?
Ny harato metaly dia fitaovana azo averina mivaingana 100% miaraka amin'ny rivotra, fanatanterahana fiarovana tsara, ary mora hanaovana modelina kanto, fametrahana tsotra, vidiny ambany ary mora fikojakojana, ary manana ny isa avo indrindra amin'ny fiarovana ny haingon-trano amin'ny haingon-trano, Ireo tombony ireo dia mahatonga ny fampiharana ny harato vy hampiasaina amin'ny toerana be olona sy be olona, ​​lasa safidy voalohany amin'ny fitaovana milamina amin'ny tontolo iainana.
Afaka manamboatra harato fanamboarana avo lenta sy tsy manam-paharoa izahay mba hahafeno tsara ny filan'ny tetik'asa.
Tongasoa eto amintsika hifandray amin'ny ivon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Mba hahatakarana ny fepetra takiana amin'ny fividianana.
Fepetra fampiasana sy politika momba ny tsiambaratelo
Olana asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra